Listen to FIAMI Radio | Zeno.FM
Ny Fiangonan'Andriamanitra Miray dia mpikambana amin'ny United Church of God, Fikambanana Iraisam-pirenena, Vondrom-paritra Afrika Atsinanana. Mitory ny Filazantsara ary manomana vahoaka ho amin'ny Fanjakan' Andriamanitra. Tranokala: https://fiamiray.blogspot.com/
20210410_Fanavahana madio sy maloto.mp3
2022-03-05-Fiangonana Reny ara-panahy.mp3
Inona ny Fiangonana sy ny antom-pisiany Fiz1-2022-02-12.mp3
Inona no Filazantsara marina?
Fantaro ny marina momba ny Filazantsaran'i Kristy.
Fety fito isan-taona
Fiainana Kristiana: Ny fety fito isan-taona no manambara ny planina lehiben’Andriamanitra hamonjena ny olombelona rehetra ho afaka amin'ny ozon'ny fahafatesana, raha manaiky an-tsitrapo izy. Ny hevi-panahin'ny andro firavoravoana voatendrin’i Jehovah dia tokony ho fantatra sy hiainantsika Kristiana mikatsaka ny Fanjakan’Andriamanitra sy maniry ho tonga zanak'Andriamanitra. Araho ary ny fanazavana ao amin'ny toriteny. Ny literatiora mirakitra ny Toriteny rehetra dia azonao vakiana ao amin’ny https://fiamiray.blogspot.com
Miomana ho amin'ny fampakaram-badin'ny Zanak’ondry
Nahoana isika no tokony hiomana ho amin'ny fampakaram-badin'ny Zanak’ondry? Inona no programan'Andriamanitra raha namorona ny olombelona Izy? Ahoana no hahatonga antsika ho zanak’Andriamanitra?
"Andriamanitra Mpahary" - Jehovah Andriamanitra Ray sy ny Teny no nahary ny zavatra rehetra. Ireo anjely maro be dia Niara-nihoby rehefa namorona ny zavatra rehetra Andriamanitra. Notendren'Andriamanitra hanapaka ny tany i Losifera, nefa nanota tamin'Andriamanitra izy, ary nitaona ny anjely namany hikomy tamin'Andriamanitra. Nisy ady tany an-danitra... Ary tonga foana sady tsisy endrika ny tany... Nanavao ny endriky ny tany Andriamanitra, ary namorona ny olombelona koa Izy. Inona no antony namoronan'Andriamanitra ny olombelona? Azonao fantarina ato ny andininy rehetra. RR. Sylvere Rafidiherimanantsoa, Fiangonan'Andriamanitra Miray, 2022/01/01
Inona no antom-pisian'ny Fiangonan'Andriamanitra?
Tamin’ny andro Pentekosta no niorenan'ny Fiangonana Kristiana voalohany (Asan’ny Apostoly 2). An'arivony maro no natao batisa tamin’ny anaran’i Jesosy tamin'io andro io. Inona no antom-pisian'ny Fiangonan'Andriamanitra? Azonao henoina ato ny momba izany.
Miara-mandeha amin'Andriamanitra ny tena Kristiana
Genesisy 5: 21-24 Jaona 15: 1-16 Hebreo 11: 8-19 - Tsy isalasalana fa namiratra tamin’ny hatsaram-panahy i Enoka. Mariho izay lazain’ny Baiboly mikasika azy. Ny filazana hoe “nafindran’Andriamanitra Enoka ka tsy hita” dia azo ampitahaina amin’ny namindran’Andriamanitra ny mpaminany Elia, izay voalaza fa nampiakarina tamin’ny tafio-drivotra ho any an-danitra ka tsy hita. Azonao arahina ao amin'ny tranokalan’ny Fiangonan’Andriamanitra Miray ny lahatsoratra mirakitra ny toriteny sy ny Sekoly Sabata, ao amin'ny fizarana hoe "Fiainana Kristiana": Https://fiamiray.blogspot.com
Fiainana Kristiana - Sabatan'i Jehovah: Famantarana - (Fiz. 2) - 1 Korintiana 5: 1-14
Jehovah Andriamanitra Ray dia nanao ny andro Sabata ho fitsaharana sy fanaovana fivoriana masina ho Azy. Fotoana hifadiana ny ratsy rehetra koa ary mitaky Fahamarinana sy Fahamasinana (1 Korintiana 5: 1-14). Manana ny hevi-panahiny ireny andro masina ireny. Anio, ny Paska ary ny Mofo Tsy Misy Masirasira no lohahevitra. Ny toriteny dia azonao vakiana ao amin'ny https://fiamikristiana.blogspot.com/p/sabatani-jehovah-famantarana-fiz2.html?m=0